Khayraadka Shaqaalaha - Zhuoer Chemical Co., Ltd.
Zhuoer Chemical Co., Limited waa shirkad si xirfadeysan loo maareeyo halkaas oo dadka halkan ka shaqeynaya ay wax walba ku kala duwan yihiin. Waxay leeyihiin xamaasad, tamar, ballanqaad iyo dareen ujeedo oo ay ku bixiyaan waxa macmiilku rabo. Waxaan nahay urur udub dhexaad u ah macaamilka halkaas oo aysan jirin meel eexasho ku saleysan isir, jinsi, caqiido iyo meesha ay ka soo jeedaan Shirkaddu waxay siisaa jawi ka caawisa shaqsiyaadka inay soo bandhigaan kartidooda waxayna abaalmariyaan waxqabadka iyo natiijooyinka. Goobta shaqada ee adag ayaa ka caawisay Zhuoer kiimikada inay soo jiidato, hormariso oo sii haysato karti.Waxa shaqaalahayaga lagu dhiirrigelinayaa inay wadaagaan fikradaha, iskaashadaan oo fahmaan inay tahay xoogga wadareed ee koox naga dhigaysa inaan guulaysanno. Waxaan nahay kuwo wax-qabad leh oo si adag u shaqeynaya si aan u abuurno dareen tayo leh dhinac kasta oo ka mid ah ururkeenna laga soo bilaabo badeecadayada iyo adeegyadayada illaa horumarinta shaqaalahayaga
Waxaan abuurnaa qorshe horumarineed oo la habeeyay si aan kaaga caawino inaad gaarto yoolalkaaga xirfadeed. Waxaan kula wadaagnaa si aan u dhisno xirfad dheer oo abaalmarin leh annagoo bixinayna:
Qorshaynta horumarinta xirfadda ee socota
Barnaamijyada tababarka gudaha iyo dibedda/ goobta ka baxsan
Fursadaha dhaqdhaqaaqa xirfadeed ee gudaha/ Shaqo Wareejinta
Shaqaale Ku Hawlan
Abaalmarinta & Aqoonsiga: Kiimikada Zhuoer waxay bixisaa jawi ka caawiya shakhsiyaadka inay soo bandhigaan kartidooda oo ay ku abaalmariyaan waxqabadka iyo natiijooyinka. Waxaan ku abaalmarinnaa xiddigleyaasheena bandhigga abaalmarino kala duwan iyo barnaamijyo aqoonsi
Madadaalada Shaqada: Waxaan u fududaynaynaa bay'ad 'Madadaalo' goobta shaqada. Waxaan abaabulnaa dhacdooyinka isboortiga iyo dhacdooyinka dhaqanka sida Maalinta Carruurta, xafladda dayrta dhexe, iwm. sannad walba shaqaalahayaga dhammaan goobaha shaqada
Kiimikada Zhuoer waxay shaqaaleysiisaa dad karti leh, ka go'an oo iskood u shaqeysta waxayna ku dadaalaan inay abuuraan jawi shaqo oo soo saarta ganacsadaha dhammaanteen.
Waa maxay sababta looga shaqeeyo kiimikada Zhuoer?
Dhiirrigelinta hoggaaminta dhallinyarada
Abaalmarinta iyo faa'iidooyinka tartanka
Awood u siinta jawiga horumarinta xirfadda iyo horumarka
Jawiga shaqada ee wada shaqaynaya oo soo jiidasho leh
Ballanqaadka fayoobaanta shaqaalaha iyo badbaadada
Shaqo saaxiibtinimo leh Jawiga shaqada